Xildhibaanada Puntland oo cod aqlabiyad ah ku diiday in xasaanada laga qaado Xil. Daad… – Hagaag.com
Xildhibaanada Puntland oo cod aqlabiyad ah ku diiday in xasaanada laga qaado Xil. Daad…
Posted on 2 Nofeembar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Mudanayaasha Golaha Wakiilada Maamul goboleedka Puntland, ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku diiday, warqad uga timid Xeer Ilaalinta Puntland oo looga codsaday Baarlamanka in ay xasaanadda ka qaadan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland.
Xeer Ilaalinta Puntland ayaa dooneysa in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad, si loogu oogo dacwad la xiriirta su’aal uu madaxweynaha ku weydiiyay furitaankii Kalfadhiga Baarlamanka.
Guddoomiyaha Guddiga Shuruucda iyo Caddaaladda Baarlamanka, Xil. Saadiq Abshir Garaad oo warbixinta u akhriyay mudanayaasha, ayaa sheegay in su’aashii xildhibaan Cawil Xasan Daad uu furitaankii Baarlamanka ku weydiiyay madaxweyne Deni ay si cad u waafaqsantahay Dastuurka Puntland iyo Xeer-hoosaadka Golaha Wakiilada.
“Codsiga Xeer Ilaalinta Puntland ay Baarlamanka u soo jeedisay in xasaanadda laga qaado xil. Cawil Daad, si dacwad ciqaabeed loogu oogo, waa mid gebi ahaanba baal-marsan Dastuurka Puntland.”ayuu u sheegay baarlamaanka Puntland Xildhibaan Saadiq.
Warbixinta Guddiga kadib, ayaa 41 mudane oo fadhiga soo xaadiray, waxay cod gacan-taag ah u qaadeen codsiga Xeer Ilaalinta, waxaana ay si aqlabiyad ah ku diideen codsigaasi, kadib markii 39 xildhibaan ay “maya” u codeeyeen.
Xildhibaan Cawil Xassan Daad ayaa u mahadceliyay mudanayaasha Baarlamanka, waxaana uuu mar kale ku celiyay in su’aashii uu madaxweynaha weydiiyay ay ahayd, mid sax ah oo waafaqsan Shuruucda iyo Dastuurka Puntland.